BusyBox 1.30.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.30.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား BusyBox
BusyBox ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
This application is an BusyBox installer for Android. Includes BusyBox v1.30.1, supported 372 applets, the most complete set of functions. Supports installation BusyBox from the application and via recovery from zip archive (see "Menu - Zip archive").
* Android 4.0 (API 14) or later
Developer site: http://meefik.ru
ဤလျှောက်လွှာကို Android များအတွက်ထိုအခါ Busy Box installer ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ Busy Box v1.30.1 ပါဝင်သည်, 372 applets, လုပ်ငန်းဆောင်တာများအရှိဆုံးပြည့်စုံတစ်စုံထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ( "- Zip archive ကို Menu ကို" ကိုကြည့်ပါ) လျှောက်လွှာထဲကနေနှင့်ဇစ် archive ကိုကနေပြန်လည်နာလန်ထူမှတဆင့်တပ်ဆင်ထိုအခါ Busy Box ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ထိုအခါ Busy Box ကို install လုပ်ဖို့ SuperUser (အမြစ်) အခွင့်ထူးလိုအပ်သော်လည်းသင်တို့သည်လည်းအမြစ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထိုအခါ Busy Box tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိုသို့အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ရန်မဆို Android ကို terminal ထဲလုံလောက်ပါတယ်:
ပို့ကုန် PATH = / Data / Data / ru.meefik.busybox / ဖိုင်တွေ / bin: $ PATH
ထိုအခါ Busy Box တစ်ခုတည်းသေးငယ်တဲ့ဟာ executable သို့အများအပြားဘုံ UNIX တွင် utilities ၏အလွန်သေးငယ်သောဗားရှင်းပေါင်းစပ်။ ဒါဟာထိုအခါ Busy Box အတွက် utilities ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏ Full-featured ကို GNU ဝမ်းကွဲထက်နည်းပါးလာရွေးချယ်စရာရှိသငျသညျအများအားဖြင့်ကို GNU fileutils အတွက်ရှာတွေ့သည့် utilities အများစုများအတွက်အစားထိုး shellutils, စတာတွေထောက်ပံ့; သို့သော်ပါဝင်သည်သောရွေးချယ်မှုများမျှော်မှန်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေးနှင့်သူတို့၏ကို GNU counterparts တွေကိုတူသောအလွန်ပြုမူ။ ထိုအခါ Busy Box ဆိုသေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် embedded system အတွက်တစ်ဦးမျှမျှတတပြည့်စုံပတ်ဝန်းကျင်ပေးပါသည်။
ဗိသုကာက ARM, x86 သို့မဟုတ် MIPS နှင့်အတူ * Device ကို
* ကို Android 4.0 (API ကို 14) သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း
* SuperUser ခွင့်ပြုချက် (အမြစ်)
developer site ကို: http://meefik.ru
ဒီပရိုဂရမ်လုံးဝအာမခံနှင့်တကွကြွလာ။ ဤသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်, သင်လိုင်စင် GPLv3 အောက်မှာပြန်လည်ဖြန်ဝေကြိုဆိုကြသည်။
BusyBox အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
BusyBox အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
BusyBox အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
BusyBox အား အခ်က္ျပပါ
andronoid စတိုး 9.22k 1.16M
BusyBox ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း BusyBox အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.30.1
App Name: BusyBox
Release date: 2019-06-21 15:35:40
လက်မှတ် SHA1: 59:23:04:A0:42:0C:4E:0A:7A:68:2E:9D:41:B9:5B:28:5A:D1:8F:37
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Anton Skshidlevsky
နိုင်ငံ (C): RU
BusyBox APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ